သံလွင်သီးဟာ သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် တကယ်အထောက်ကူပြုနိုင်လို့လား ? – BaHuTuTa
သံလွင်သီးဟာ သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် တကယ်အထောက်ကူပြုနိုင်လို့လား ?
November 11, 2020 admin Food, Knowledge 0
သံလွင်သီးကို စာဖတ်ပရိသတ်ကြီး ရင်းနီးပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ပေါပေါများများ တွေ့နိုင်တာမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပီဇာတွေ၊ ရေခဲမုန်နဲ့ ကိတ်မုန့်တွေမှာတော့ ထည့်သွင်းအသုံးပြုကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အများအားဖြင့်တော့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်တွေက သံလွင်သီးကိုစားသုံးပေးခြင်းဖြင့် ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုတယ်လို့ တညီတညွှတ်တည်း ထောက်ခံကြပါတယ်။
ရှေးပဝေသဏီ ကတည်းက- သို့သော် သံလွင်သီးဟာ ခြွင်းချက်မရှိ လူကိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတာလို့တော့ ပြောလို့မရပါဘူး။ သူမှာ လူအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်တဲ့ အာဟာရနဲ့သတ္တုဓာတ်တွေ အများအားဖြင့် ပါဝင်ပေမယ့်၊ ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်စေတဲ့ဓာတ်တွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ သံလွင်ပင်တွေဟာ ရှေးပဝေသဏီကတည်းက ကမ္ဘာပေါ်မှာတည်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ ရှေးယခင်တုန်းကတည်းက ယုံကြည်စွာ စားသုံးခဲ့ကြပါတယ်။
ပုံစံ- သံလွင်သီးဟာ အသားထူပြီး အရည်ရွှမ်းတဲ့ သပြေသီးအရွယ် အသီးတွေဖြစ်ပြီး၊ သာမန်အားဖြင့်တော့ အသီးရဲ့အရောင်ဟာ အစိမ်းရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ ခရမ်းနုရောင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့မျိုးရင်းတွေက အသီးရင့်မှည့်သည့်တိုင်အောင် အစိမ်းရောင်ကနေ ပြောင်းလေ့မရှိပေမယ့်၊ အချို့မျိုးရင်းတွေကတော့ ပါဝင်တဲ့ဓာတ်ပေါင်း ကွာခြားခြင်းကြောင့် ခရမ်းရောင်၊ ခရမ်းနုရောင် ရှိတတ်ပါတယ်။
မျိုးရင်းများ –သံလွင်ပင်ဟာ ဆွေမျိုးစပ်ပါက သရက်၊ ချယ်ရီ၊ မက်မွန်၊ အယ်လ်မွန်၊ သီဟိုဠ်စတဲ့ မျိုးရင်းတွေနဲ့ တော်စပ်မှုရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ သံလွင်မျိုးရင်းမှာ အမည်းရောင်၊ ခရမ်းရောင်အသီးဆိုတာ အစတုန်းက မရှိခဲ့ပါဘူးတဲ့၊ နောက်ပိုင်းမှာ ပေါက်ရောက်ရာဒေသနဲ့ အခြားအပင်တွေရဲ့မျိုးရိုးတွေနဲ့ မျိုးစပ်မှုတွေများပြားလာတဲ့အခါ အမည်းရောင်ဖြစ်သွားပြီး၊ ယင်းအသီးတွေမှာ သံဓာတ်၊ ဂလူကိုနိက်၊ အီကာအီး579 စတဲ့ဓာတ်တွေ လွန်ကဲစွာပါဝင်ပြီး အမဲရောင်ခြယ်တွေကို ဖြစ်စေတာပါ။
များပြားစွာ မစားသုံးသင့်ပါ- အမည်းရောင်၊ သပြေသီးရောင်၊ ခရမ်းရောင်သံလွင်သီးဟာ အလွန်များပြားစွာ မစားသုံးသင့်ပါဘူး။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ရှိပါတယ်။ အဲဒီလိုအသီးတွေမှာ Acrylamide လို့ခေါ်တဲ့ ဓာတုဓာတ်ပေါင်းပါဝင်ပြီး၊ ယင်းဓာတ်ပေါင်းဟာ ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားခြင်းတွေနဲ့ မြင့်မားစွာစပ်စပ်နေပါတယ်။ နည်းနည်းဆို ကိစ္စမရှိပေမယ့်၊ များသွားရင် စိုးရိမ်စရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ မများရင် ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်စေလိုပါတယ်။
သံလွင်သီးတိုင်းမှာ ပါဝင်တဲ့ဓာတ်ပေါင်းများ- သံလွင်သီးတိုင်းမှာ Antioxidant ဓာတ်ပေါင်းတွေများစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဗီတာမင် E (အရွယ်တင်နုပျိုခြင်းကို ဖြစ်စေတယ်)နဲ့ နှလုံးကျန်းမားရေးကို အထူးအထောက်ကူပြုတဲ့ ဓာတ်ပေါင်းတွေ ရှာပါးတဲ့ Oleic acid လို့ခေါ်တဲ့ Fatty acid အဆီဓာတ် (၇၄)%အထိ ပါဝင်လို့ ကျန်းမာရေးအတွက် အထူးသင့်လျှော်ပါတယ်။ အလွန်ရှားပါးတဲ့ Oleuropein, Hydroxytyrosol, Tyrosol, Oleonalic acid စတဲ့ဓာတ်တွေ ပါဝင်ပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူအများကြီး ပြုပါတယ်။
ါ့အပြင် သံလွင်သီး(၁၀၀)ဂရမ်မှာ ကယ်လိုရီ (၁၁၅ မှ ၁၄၅)အတွင်း ပါဝင်ပြီး၊ သံလွင်သီးတစ်ခုမှ ရေဓာတ် (၇၅-၈၀)%၊ Fat (၁၁-၁၄)%၊ ကာဗိုဟိုက်ဒြိတ် (၄-၆)%၊ ပရိုတိန်းအနည်းငယ် ပါဝင်ပါတယ်။ နှလုံးနဲ့ ကျောက်ကပ်အပြင် သွေးတိုး၊ ဆီးချိုရောဂါသမားတွေကတော့ လက်ဆက်တဲ့ သံလွင်သီးကို နေ့စဉ်အနည်းငယ် ပုံမှန်စားပေးသင့်ပြီး မမှည့်သေးတဲ့သံလွင်သီးက ပိုသင့်တော်ပါတယ်။
သံလွင်ဆီမှာ ပါဝင်တဲ့ဓာတ်ပေါင်းများ-ကျန်းမာရေးနဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေမှာ ဖြည့်စွက်ကုန်ကြမ်းအဖြစ် ပါဝင်လေ့ရှိတဲ့ သံလွင်ဆီကတော့ ရှာပါးတဲ့ Oleic acid လို့ခေါ်တဲ့ Fatty acid အဆီဓာတ် (၇၄)% အထိ ပါဝင်လို့ ကျန်းမာရေးအတွက် အထူးသင့်လျှော်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သံလွင်သီးဟာ လူတိုင်းရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ လိုက်လျှောညီထွေရှိတယ်ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။
သို့ပေမယ့် တစ်ထိုင်တည်းမှာ များများစားရင်တော့ မသင့်လျှော်ပါဘူး။ သံလွင်သီးမှာ မြင့်မားတဲ့ သဘာဝဆားဓာတ်လည်း ပါဝင်တာကြောင့် ဒီဓာတ်ပေါင်းကလည်း များများစားရင် စားသလောက် ဆိုးကျိူးကိုဖြစ်စေမှာပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစာလည်းဆေး၊ ဆေးလည်းအစာဆိုပေမယ့် မည်သည့်အစားအစာကိုမဆို အသိဉာဏ်နဲ့ယှဉ်ပြီး စားသုံးကြဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။